Miaritra ny tsy zaka, mizaka ny tsy aritra… | NewsMada
Efa ampolony ireo tafaroboka: Tratra ilay mpisoloky amin’ny alalan’ny Sms ...janvier 15, 2021
Enquêtes sur le trafic de 73,5 Kg d’or: Le DG de l’ACM convoqué à la gendarmerie ...janvier 15, 2021
Lozam-pifamoivoizana teny amin’ny RN4 sy ny RN7: olona efatra indray maty, maro ireo naratra
Covid -19 – Le bilan s’alourdit: six morts en une semaine
Fiadidiana ny Repoblika: tsy hisy fanamboarana ny governemanta
Remaniement: la Présidence met fin aux supputations
Efa ampolony ireo tafaroboka: tratra ilay mpisoloky amin’ny alalan’ny Sms
Enquêtes sur l’affaire des 73,5 kg d’or: le DG de l’ACM convoqué à la gendarmerie
Prefektioran’Antananarivo – Famoriana olona: « Tsy mila maka alalana ny fiangonana »
Rebond du Covid-19: le reconfinement n’est pas à écarter
55 taona ny zokiny indrindra: ravan’ny polisy ny andian-jiolahy mpamaky trano sy mpanolana
73,5 kg d’or saisis en Afrique du Sud : La douane malagasy révèle des falsifications de dossiers
Miaritra ny tsy zaka, mizaka ny tsy aritra…
Par Taratra sur 23/01/2017
Anisan’ny fanambin’izao fitondrana izao ny fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly… Miara-dalana amin’ireo ny hoe fangaraharana. Ny tsy fanaovana sy tsy fahatanterahan’iretsy voalohany no tsy mampisy ny fangaraharana? Tsy misy koa izay fanazavana, serasera…
Saika izany avokoa ny natao hatramin’izay? Tsy tan-dalàna na tsy manaja lalàna, ka ratsy tantana. Na misy ny kolikoly, ka takona ho azy amin’izany ny fangaraharana. Jereo amin’ireo raharaha tsy mazava tato ho ato, na niniana natao amboletra, odian-tsy hita sy re raha misy miteny sy mitaraina.
Teo, ohatra, ny fomba fanendrena Praiminisitra, ny fahazoana maro anisa eny amin’ny Antenimiera, ny “Raharaha Anjozorobe“, ny fakana an-keriny tany Toamasina, ny baomba nipoaka teny Mahamasina ny 26 jona 2016, ny nenti-nanana ny Frankofonia, ny “Raharaha Soamahamanina“…
Tsy mahagaga raha mitohy ny tsy fanjariana, tsy fahombiazana, fahoany fahoany… Vokatry ny kiantranoantrano, ny fisian’ny tsimatimanota… Na izay heverina ho tsy inona aza, voatsara ambony ihany noho izany avokoa. Noho ny tsy fifampitokisana, ny fampandriana adrisa miverimberina…
Na ny havandra tamina faritra sasany talohaloha teo, na ny fihantonan’ny orana aty afovoan-tany, na ny horohoron-tany, na ny tondra-drano any atsimo… Misy mihevitra noho ny afitsoky ny mpitondra, hita maso na tsia. Zary tsy mampiraika ny maro izay atao sy miseho, na izay lazaina?
Efa zary tsy mampiraika intsony ny tsy fandriampahalemana, ny delestazy, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fitsaram-bahoaka…. Raha miaritra ny tsy zaka, mba mizaka na miteny ny tsy aritra: misy mihaino? Izany ny Malagasy izao, mila tsy hahavaka intsony ny tsara sy ny ratsy, ny azo zakaina na tsia…
Misy fetra ny zava-drehetra? Na tsy hita izay (h)atao… Mba hahazoana miteny “eny“, tokony ho afa-miteny “tsia“, raha ny nambaran’ny filoha Frantsay teo aloha, François Mitterrand, izay. Mbola vitan’ny fimenomenonana sy fizakana izay mitranga ve ny raharaha? Na ny fandavana fotsiny…
Fitsipiky ny teny malagasy: mila hamaroina ny boky… 18/01/2021
Kolontsaina sy zavakanto taona 2021: samy mbola mifampijerijery ny rehetra 18/01/2021
No Doze: nitondra ny hiran’ny taona 80-90 ry Tony Ratefy 18/01/2021
Tsy ampy fikojakojana sy fanajariana nytany volena 18/01/2021
Tombola Shoprite: azon’i Lovatiana R. ny fiara Great M4 18/01/2021